पशुपतिमा जलहरी : जबर्जस्ती नगर- विचार - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन १४, २०७७ सम्पादकीय
पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र शिवलिंगमा सुनको जलहरी राख्ने विषय यसै पनि विवादास्पद थियो । सोमबार त सर्वोच्च अदालतले पनि छलफलको टुंगो नलागेसम्म जलहरी लगाउने कार्य नगर्नू/नगराउनू भन्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ । तैपनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यहाँ बिहीबार ९६ केजी सुन लगाइसकेको छ ।
जलहरीको बीचतिरको नागको आकृतिलगायत भाग मात्रै बनाउन बाँकी छ । यो कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिक्रिया दिएको कोषका अनुसार अब १२ केजी सुन राख्न बाँकी छ । सर्वोच्चको आदेशका बाबजुद काम अगाडि बढाउनु आफैंमा आपत्तिजनक छ, यो कार्यले न्यायालयकै अपमान हुनेछ । अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै कोषले जलहरी लगाउने कार्य अहिलेलाई अघि बढाउनु हुँदैन ।
कोषले ज्योतिर्लिंगमा जलहरी लगाउनुको औचित्य र अन्तर्य स्पष्ट देखिँदैन । फेरि, पुरातत्त्वविद्लगायतका सरोकारवालाले यो कदमको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् । सरोकारवालाको कुरा सुन्नेभन्दा पनि जलहरी नलगाई नछाड्ने उसको एकोहोरो जिद्दी सरासर अनुचित देखिन्छ । आगामी दिनमा सर्वोच्चले यो विषयमा आफ्नो फैसला त सुनाउला नै, तर त्यस अवधिसम्म कोषले पनि यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्व भएको र त्यही कारण देश–विदेशमा विख्यात रहेको मन्दिरभित्रको शिवलिंगमा जलहरी लगाउने कार्यलाई कोषले अति सामान्य परिवर्तनजस्तो ठान्नु हुँदैन । यसबाट पुरातात्त्विक महत्त्वलगायतका विषयमा असर पुग्ने विज्ञहरूको तर्कलाई उसले सुन्नुपर्छ । र, जलहरी लगाउनैपरे पनि विज्ञ तथा सरोकारवालालाई अनिवार्य रूपमा विश्वासमा लिनुपर्छ ।
पुरातात्त्विक मूल्य–मान्यताका हिसाबले मात्र होइन, वर्तमान ऐन–कानुनका दृष्टिले पनि कोषले यो किसिमले जलहरी लगाउनु गलत देखिन्छ । छिटो काम सक्ने नाममा कतिपय विधि मिचिएका छन् । पहिलो त, यो कार्यले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन–२०१३ को उल्लंघन गरेको छ । ऐनले सम्पदास्थलमा कुनै नयाँ संरचना बनाउन, स्वरूप बिगार्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो, पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएकाले युनेस्कोको बडापत्रले पनि नयाँ स्वरूप बनाउन निषेध गरेको छ । कुनै पनि प्राचीन धरोहर विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुँदा जे–जस्तो अवस्थामा थियो, त्यही रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त बडापत्रले गरेको छ । तसर्थ, पशुपतिमा कुनै नयाँ काम गर्दा यी पक्षमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । पशुपतिनाथकै कारण काठमाडौंको विश्व सम्पदा क्षेत्र खतराको सूचीमा पर्ने विज्ञहरूको चिन्तालाई कोष र सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।
त्यसो त, धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट पनि ज्योतिर्लिंगमा जलहरी राख्न उचित नहुने बताइन्छ । सुनको जलहरी राख्नु शैव दर्शनअनुसार नभएको जानकारहरूको तर्क छ । शैवमार्गीको विश्वासअनुसार शिव स्वयंमा तडकभडकबाट मुक्त देवता हुन् । उनी नाङ्गै बस्छन्, खरानी धस्छन् र बाघको छालाको कछाड बाँध्छन् भन्ने मान्यता छ । कुनै गहना नलगाउने उनी घाँटीमा सर्पको माला बेर्छन् भन्ने धर्मावलम्बीहरूको विश्वास छ । त्यही भएर, शैवमार्गीहरू प्रश्न गर्छन्— यस्ता देवतालाई किन महँगो धातु बेरिदिनु ? पशुपतिनाथ मूल रूपमा धार्मिक आस्थाको केन्द्र भएकाले कोषले यो तर्क र आस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
कतिसम्म भने, पशुपतिनाथमा हालै क्षमापूजा गर्दा शास्त्रीय विधान मिचियो भनेर पञ्चांग निर्णायक समितिका अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । शुक्रअन्ध भएका बेलामा आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने जात कर्म र मृत्यु कर्म मात्र गर्न मिल्ने शास्त्रीय मान्यता छ । पशुपतिमा गरिएको क्षमापूजा काम्य कर्मअन्तर्गत पर्छ, जुन शुक्रअन्धका बेला गर्न शास्त्रमा निषेध गरिएको छ । तसर्थ, शास्त्रसम्मत चल्ने धार्मिक केन्द्रमै शास्त्रीय विधि मिचेर कार्य गर्नु शोभनीय नहुने तर्कमा दम छ ।
कोषले पशुपतिनाथको सम्पत्ति बढ्यो भनेर गर्व गर्दै जलहरी जडानमा जोड दिएको छ । तर जलहरीलाई पशुपतिनाथको भण्डारमा राखिएजस्तो सम्पत्तिका रूपमा लिन मिल्दैन । ज्योतिर्लिंगमा राखिएको जलहरी चाहिएको बेला प्रयोग गर्न सकिँदैन, न त त्यसो गर्नु व्यावहारिकै हुन्छ । इतिहासमा देशलाई संकट पर्दा पशुपतिनाथको ढुकुटीबाट सम्पत्ति झिकेर समस्या टारिएका दृष्टान्त छन् । दास प्रथा अन्त्य गर्दा समेत दास–दासीको मूल्य साहुलाई तिर्न पशुपतिनाथकै ढुकुटी चलाइएको थियो । जलहरीको सट्टा यति ठूलो धनराशिको कोष बनाएको भए पशुपति क्षेत्रका मठमन्दिर मर्मतमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । यहाँका जात्रा–पर्व संरक्षणका लागि रकम अभाव हुँदैनथ्यो । यत्रो रकम अन्य मानव सेवाका लागिसमेत खर्च गर्न सकिन्थ्यो । यी विषयमा ध्यान दिएको भए बरु पशुपतिनाथको गरिमा झनै बढ्ने थियो ।
यस्तै, एकै ठाउँमा यति धेरै बहुमूल्य धातु राख्दा मन्दिरकै सुरक्षामा पनि चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । मन्दिर सुरक्षाका लागि सेना नै राख्नुपर्ने गरी चुनौती निम्तियो भने के गर्ने ? इतिहासमा मुलुकमा विकास गतिविधि नभएको र मठमन्दिर निर्माणमा राजा–महाराजाको विशेष चासो भएकै बखत पनि पशुपतिमा यसरी सुनको जलहरी राखिएको थिएन । त्यसैले, विगतमा किन सुनको जलहरी राखिएन भन्ने पक्षमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यस्ता कुनै पनि विषयमा पर्याप्त छलफलै नगरी कोषले हतार–हतार राष्ट्रपतिबाट यस कार्यको उद्घाटन गर्नुको कारण बुझिनसक्नु छ । जबकि, कोषकै अनुसार पनि यो काम अझै सकिएको छैन । जलहरी पूरै निर्माण गरिसकेर उद्घाटन गराउने धैर्यसमेत कोषले नराख्नुले पनि सही सन्देश दिएको छैन ।
मुख्य प्रश्न त फेरि पनि, सुनको जलहरीले शिवलिंग सजिन्छ कि, त्यसमा क्षति पुग्छ भन्ने नै हो । पुरातात्त्विक क्षति मात्र होइन, विगतमा भौतिक क्षति नै पुगेको पनि दृष्टान्त भएकाले कोषले यी सबै पक्षमा विचार गरेर मात्र यस कार्यलाई अघि बढाउनुपर्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ ०६:५९
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेयताको तीन वर्षमा व्यक्तिवाद, सामूहिक प्रणालीमाथिको प्रहार र वैचारिक छलफल नरूचाउने शैली प्रधानमन्त्री ओलीमा बढेर गयो । ओलीका कार्यशैलीको विरोध गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध आन्दोलन चर्काएका दाहाल–नेपालमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।
फाल्गुन १४, २०७७ बिनु सुवेदी
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गत ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय बदरको फैसला सुनाउँदा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल चितवनको एक रिसोर्टमा थिए । १२ गतेका लागि तय भएको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका उनीहरूले एकछिन उत्सव मनाए र त्यो सभालाई विजयसभामा परिणत गर्ने घोषणा गरे ।
तस्बिर : गंगा दाहालको फेसबुकबाट
अध्यक्ष दाहालले यो घोषणा गर्दा प्रफुल्लित कार्यकर्ताले जोडले ताली बजाएर समर्थन गरे । खुसियालीमा लड्डु पनि ल्याइएको थियो । दुई अध्यक्षले एक–अर्कालाई लड्डु खुवाएर उत्सव मनाए । त्यो उत्सवमा खुसियालीभन्दा धेरै उत्ताउलोपन देखियो, जुन दृश्यले नेकपाभित्रैका धेरै नेता–कार्यकर्ताको आँखा बिझायो । त्यो दृश्य ठ्याक्कै त्यस्तै थियो– जस्तो २०७४ फागुन २ गते प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई तत्कालीन एमाओवादीले समर्थन गर्ने सहमतिपछि ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ समेत परेको भन्दै ओली र दाहालले आपसमा फूल साटासाट गरेर प्रेम प्रदर्शन गरेका थिए ।
नेकपाका अध्यक्षद्वयको यो गतिविधिले ‘हामीले केपी ओलीलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै यो आन्दोलन गरिरहेका छैनौं, आन्दोलन त केपीवादका विरुद्धमा हो’ भनेर बारम्बार गरेको उद्घोषको सरासर उपेक्षा गर्‍यो । नेकपा अनुशासन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका नेता अमृतकुमार बोहरा सामन्ती प्रवृत्ति आफूहरूतिरको नेकपामा पनि भएको र त्यसलाई सच्याएरै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वीकार गर्छन् । ‘ओली प्रवृत्तिसँग लड्ने भनेको त व्यक्तिसँग मात्रै होइन नि, नेताहरूको आचरण साधारण र सामान्य बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सधैंभरिको कुरा हो,’ बोहराले भने, ‘तर कहिलेदेखिको शैली रातारात परिवर्तन हुँदो रहेनछ, सच्चिएर अघि बढ्न जरुरी छ ।’
पुस ५ अघि तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधि र पद्धति नमानेको भन्दै सबैभन्दा धेरै कुरा उठाए । पार्टी कमिटीले निर्णय गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन र छलफलका लागि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उनको कुरामा बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरू सहमत पनि थिए । तर नयाँ सरकारको समीकरण बनाउने चक्करमा यिनीहरूले पार्टीका सांसद र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नदिईकन दौडधुप चलाइहाले ।
पहिले नेताका दैलो चहार्ने र त्यसपछि बल्ल पार्टी बैठकमा ब्रिफिङ गर्ने चलनलाई नेकपाको विधानले पार्टी विधि र पद्धतिका रूपमा ग्रहण गर्दैन । स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा नेकपाका नेताहरूले अहिले ओलीलाई गाली गर्नभन्दा पनि आफैंभित्र रहेको ओली प्रवृत्तिविरुद्ध लड्नुपर्ने बताउँछन् । ‘केपी ओलीलाई गाली गर्नुको अर्थ छैन, हामीभित्रको केपी प्रवृत्तिभित्र लड्ने कि नलड्ने भन्ने कुरा मुख्य हो,’ शर्माले भने, ‘हामी व्यक्ति आफैं, नेतृत्व र संस्थालाई नै विधि पद्धतिमा चलाउन के गरिरहेका छौं भनेर गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्छ ।’
प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ ०६:५३